Gabar Wariye ah oo caawa lagu dhaawacay magaalada Galkacyo; xaaladdeeda oo miyir-qab lagu tilmaamay. – Radio Daljir
Galkacyo, Sept, 14 – Waxaa caawa lagu dhaawacay magaalada Galkacyo Xorriyo C/qaadir oo ah gabar wariye oo ka tirsan idaacadda Radio Galkacyo, taas oo dhaawaceeda hadda lagu dawaynayo isbitaalka Dhagacadde ee magaaladaasi.
Rag hubaysan ayaa rasaas ku furay wariyaha waxaana ku dhacay 3 xabadood oo ka haleelay laabta, xilli ay ku sii socotay gurigooda oo ku yaalla dhinaca dambe ee Iskuulka Umadda ee magaalada Galkacyo.
Mid ka mid shaqaalaha caafimaadka ee Isbitaalka wariyaha lagu dawaynayo ayaa Radio Daljir u sheegay in 3 xabadood ay wariyaha laabta kaga dheceen oo laba ka mid xabadahaasi ay dhabarka ka bexeen. ?Dhiig ayaa hadda lagu shubayaa wayna miyir qabtaa? ayuu yiri qofkaasi ka tirsan shaqaalaha caafimaadka ee isbitaalka oo diiday in codkiisa iyo magaciisa midna la xigto.
Bishii August 2010-kii ayaa waxa rag midiyo ku hubaysani xaafadda Garsoor ee magaalada Gaalkacyo ku dileen Cabdullahi Cumar Geeddi oo katirsanana jiray shaqaalaha Radio Daljir. Isla magaaladaa waxa horay loogu dhaawacay loogu dhaawacay wariye Max?med Yaasiin Isxaaq oo u shaqaynayey idaacadda VOA.
Maamulka sare ee Radio Daljir waxa ay aad uga xunyihiin isku-dayga la doonayay in lagu khaarajiyo wariye Xorriyo Cabdulqaadir, isla markaana dhaawaca culus loogu gaystay. Radio Daljir waxa uu aad u cambaaraynayaa falkan iyo mid walba oo noociisa ah ee lagu cabburinayo fikirka xorta ah ee muwaadininta iyo saxafiyiinta. Dhinaca kalena maamulka Daljir waxa uu ugu baaqayaa qaybaha bulshada in la ixtiraamo lagana qayb-qaato ilaalinta wariyaha sidoo kalena ay dawladdu gacan ka gaysato sidii caddaaladda loo horkeeni lahaa dhagar-qabayaashii soo abaabuliyay isla markaana fuliyay fal-dambiyeedka lagu dhaawacay wariye Xorriyo Cabudlqaadir.
Ugu dambayntii Radio Daljir waxa uu saxafiyadda la dhaawacay u rajaynayaa allena uga baryayaa caafimaad iyo soo kabasho dag-dag ah iyo in ay dib ugu soo noqoto mihnaddeedii iyada oo bad qabta.